Dibadbax kadhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo kadhacay Bosaso – Radio Daljir
Noofember 1, 2017 8:30 b 0
Hal qof ayaa geeriyooday , laba kallena waa ay ku dhaawacmeen dibadbax kadhacay magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari.
Dibadbaxa ayaa ahaa mid looga soo horjeeday xirnaashiyaha dekedda Bosaso oo maalintii todobaad aanay kasocon wax soo dhaqdhaqaaq soo dejin iyo dhoofin ah, kadib markii ganacsatadu ay sheegeen in lagu kordhiyay lacagihii doonyaha kusoo xiranaya dekedda.
Dadka dibadbaxayay ayaa sidoo kale ku qaylinayay erayo ay ku diidanyihiin shirkadda dekedda Bosaso maamulaysa ee laga leeyahay wadanka Imaaraatka Carabta.
Khasaaraha dhimashada iyo dhaawac ayaa yimid kadib markii ciidamada ay rasaas ku fureen dadwaynaha si’ay ukala eryaan.
Xaaladda ayaa imminka ah mid degan, iyadoona ay socdaan kulamo ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka ay uga hadlayaan xaaladda dekedda Bosaso.